/blog/gallery/Kedu ka Orlistat si arụ ọrụ dị ka ọgwụ na-efu ibu dị arọ?
Ihe na 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 dere na gallery.
Dabere na nyocha sitere na World Population Review, United States na-eme ọkwa nke 12 nke ụwa maka oke ibu na ndị bi na ya. Center Centre for Disease Control (CDC) na-eme atụmatụ na 36.9% nke ndị okenye America karịrị afọ 20 ka afọ buru ibu, dabere na data anakọtara na 2016.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-egosi na 41.1% nke ụmụ nwanyị, yana 37.9% nke ụmụ nwoke - ma ọ bụ karịa karịa nde 160 nde ndị America, na-ebuso oke ibu agha. Onu ogugu onu ogugu enwere ugbua gosiputara okpukpu obuba na onu ogugu ndi mmadu n’eriri iri ato gara aga.
O di nwute, data adighi adi nma maka ndi ntorobia America. Ihe dị ka 15% nke ndị niile nọ n'afọ iri na ụma na ụmụaka nwere oke ma ọ bụ ibu, nke dị okpukpu atọ ma e jiri ya tụnyere 1980s.
Dabere na data sitere na steeti oke ibu, data na-adịbeghị anya sitere na Sistemụ Nlekọta Ahụhụ Behavioral Risk Factor Surware (BRFSS), na-egosi steeti itoolu nwere oke ibu karịa 35%. Kansas, Florida, New Mexico, Utah, Missouri, Minnesota, na New York niile hụrụ oke ibu na-ebilite na ndị okenye na ụmụaka n'etiti afọ 2017 na 2018. (1,2)
Yabụ, gịnị kpatara America ji eme ihe banyere oke oke ibu na-emetụta ndị okenye na ụmụaka n'ofe mba ahụ? Ibu oke nwere njikọ siri ike na nhọrọ ndụ na adịghị mma. Playmụaka na-egwuri egwu n'èzí erughị ka ha mere na 1980s, na ọganihu na teknụzụ na-ewebata egwuregwu vidiyo na ụdị ntụrụndụ ndị ọzọ na-eme ka ụmụaka na-anọ naanị otu ebe.
Ndị okenye nwere ntụrụndụ na ọrụ nnyefe nri dị njikere kwa ụbọchị. Ngwa ndị ọzọ niile anyị nwere na ndụ anyị na-agbakwunye ịba ụba calorie, na ezughi oke mgbatị ahụ iji kpochapụ ike oriri.
Iri ọtụtụ calorie maka mkpa ike gị na-eduga n'ahụ, na-echekwa ike zuru oke dị ka abụba. Nhọrọ nke ndụ na-adịghị mma, nri dị kalori dị oke nke jupụtara na carbohydrate na abụba ọjọọ, yana obere mmega ahụ, bụ usoro maka oke ibu - ihe niile ọ na-ewe bụ oge.
AASraw bụ supplierof dị irè na-efu ọnwụ ntụ ntụ-Orlistat ntụ ntụ.
Biko pịa ebe a maka ozi ọnụahịa. Kpọtụrụ anyị
1. Kedu ihe bụ Orlistat?
Ibu oke na - egbochi ndụ onye ọ metụtara. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị America ghọtara na ibubiga ibu oke nwere ike imetụta ahụ ike ha, ọ bụ mmadụ ole na ole na-ekpebi ime ihe iji gbochie ha ịmalite oke ibu.
Ọtụtụ ndị buru ibu ma buru ibu enweghị ihe ọmụma na ọzụzụ dị mkpa iji megharia ahụ ma ọ bụ nri na-egbochi calorie. Maka ndị na-amalite mgbanwe anụ ahụ, ihe na-erughị 5% na-ejikwa iru ebumnuche ha.
Nke bụ eziokwu bụ na ịhapụ abụba buru ibu mgbe ị buru ibu ma ọ bụ buru ibu bụ ihe ịma aka ole na ole yiri ka ọ ga-emeri. Nginggbanwe omume ibi ndụ, ịgbanwee nri, yana ịmalite usoro mmega chọrọ chọrọ nraranye dị ukwuu n'aha onye buru oke ibu.
Na-enweghị nduzi na mkpali, onye buru oke ibu nwere ntụgharị nke anụ ahụ ya, na-eme ka ha daba n'omume na-emebi ihe.
Ọganihu na sayensị na-edozi ahụ n'ime afọ 20 gara aga rụpụtara ụfọdụ ọmarịcha ihe ụtọ na-atọ ụtọ na usoro ọgwụgwọ ọgwụ maka ijikwa na ịgwọ oke ibu. “Grail nsọ” nke nnyocha pharma bụ iji mepụta ọgwụ na-ewepụ oke ibu nke na-enye ndị oke ibu ohere ịlaghachi ahụ ha na ahụike BMI dị mma.
Nwere ike ịchọta onwe gị na-enweghị obi abụọ banyere onye ọ bụla na-edozi ahụ ma ọ bụ dọkịta na-agwa gị na enwere ọgwụ mgbochi oke ibu maka oke ibu.
Orlistat, nke akpọrọ aha Alli na Xenical mara aha ya, nwere ikike ịbụ ọgwụ oke ibu ọrụ ọrụ ebube na-enye ndị buru oke ibu ohere iweghachi ahụ ike ha.
Ndị buru oke ibu nwere ike ịzụta Orlistat n'elu mpempe akwụkwọ na 60mg (Alli). 120dị XNUMXmg (Xenical), chọrọ ndenye ọgwụ dọkịta maka ịzụta na ojiji. Enwere ọtụtụ ụdị ọnụọgụ dị n'ịntanetị.
Orlistat bụ ọgwụ enyere iji mejupụta usoro ihe oriri na mmega ahụ nke mmadụ. Ya mere, anyị enweghị ike ịkpọ ya ọgwụ mgbochi ọnwụ, ọ bụ ọrụ ebube, n'ihi na ọ ka chọrọ ka onye ọrụ tinye mbọ ụfọdụ na nri na mmega ahụ ha.
Otú ọ dị, akụkọ ndị ọrụ na-egosi na Orlistat bụ ọgwụ dị irè iji mee ka ọ ghara ịdị na-ebuwanye ibu mgbe a na-elekọta ya na usoro nri na-edozi ahụ na nke mmega ahụ maka mkpa onye ahụ buru oke ibu.
Ndị okenye karịa afọ 18 dị afọ nwere ike ịzụta mbadamba 60mg Orlistat n'elu tebulu, ma ọ bụrụhaala na ha nwere Isi Mass Index (BMI) nke 25 ma ọ bụ karịa. Ndị buru oke ibu nwere ọrịa BMI karịrị 30 nwere ike ịga dọkịta ha maka ndenye ọgwụ mbadamba 120mg Orlistat maka iji ya na yana nri na -efu oke ibu.
Ndị dọkịta nwekwara ike ịnabata iji ụdị 120mg na ndị nwere ọrịa BMI dị ala dị ka 27, ma ọ bụrụ na ha na-emeso nsogbu ahụ ike ndị ọzọ, dị ka ọrịa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali elu. Ndị ahụ na-eji Orlistat n'okpuru nlekọta nke ọkachamara ahụike nwere ike idebe ka mkpuchi mkpuchi ha kpuchie ọnụ ahịa ọgwụ ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụghị mkpuchi mkpuchi niile nwere ike ikpuchi ọgwụgwọ ahụ. Findchọta onye na-eweta Orlistat na ntanetị dịtụ mfe, ụkpụrụ nduzi Orlistat maka ndị na-ere ịntanetị na-agbanwe iche, dabere na aha na ịdị mma.
Yabụ, kedu ka Orlistat si arụ ọrụ?
Orlistat na-egbochi traktị GI na iwepu abụba na nri ị na-eri. N’ihi nke a, abụba a na-achịkwaghị achịkwa n’ime nri gị na-agafe n’ọkpụkpụ eriri afọ gị, ebe ahụ na-eji ya eme ihe n’echeghị echiche.
Carbohydrates na protein nwere calorie 4 nke ike na gram ọ bụla. Agbanyeghị, gram abụba nwere 9-kalori. Ya mere, echiche dị n’azụ eji Orlistat bụ igbochi ndị buru oke ibu ịnabata ihe oriri a.
Ndị buru oke ibu na-eri nri nwere abụba dị elu, na nhọrọ ha na-ahọrọ adịghị mma. Site na igbochi ị caloụ caloric na ịgbanwe nri onye ahụ buru oke ibu na nhọrọ dị mma, onye buru oke ibu ga-amalite ịhụ nsonaazụ izu na izu na mgbanwe ahụ ha.
Agbanyeghị, ndị buru oke ibu nwere ike ịnwe afọ 3 ruo afọ 5 nke raara onwe ha nye mgbanwe na nri, mmega ahụ, na ihe ndụ, tupu ha alaghachi na BMI ahụike.
Manọgide na-eguzosi ike na mgbanwe ibu ibu nke ịdị ukwuu a bụ ihe ịma aka nye mmadụ ọ bụla. Ya mere, ndị oke oke nwere ike ịgbakwunye usoro nri ha na usoro mmega ahụ site na iji Orlistat iji mee ka nsonaazụ dị ngwa.
2. Ekwenyere Orlistat ka ọ bụrụ ihe nchebe maka FDA?
Dịka ọ dị n'ọgwụ ọ bụla, Orlistat nwere nyocha nke ọma na nyocha nke FDA. Orlistat FDA masịrị ya wee banye na 1999 n'okpuru CAS Number 96829-58-2.
FDA nwalere ụdị ọgwụ a na-ahụ maka ọgwụ ahụ na ọnwụnwa ahụike n'oge 1999, na-akwado ụdị Xenical nke ọgwụ kwesịrị ekwesị maka ojiji n'akụkụ nduzi nke ọkachamara ahụike a zụrụ azụ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na Xenical dị naanị n'okpuru ndenye ọgwụ.
FDA kwadoro Alli (60mg Orlistat) ka ọ bụrụ ihe nchekwa maka iji ndị mmadụ karịrị oke afọ karịa afọ 18. Agbanyeghị, ụdị 60mg dị maka zụrụ n'elu counter. Ọ bụ ezie na ụdị OTC bụ naanị maka iji nri kalori na-egbochi, obere abụba, enwereghị ihe akaebe zuru oke nke nduzi achọrọ mgbe ndị oke karịrị. zụta Orlistat nyefe n'aka.
FDA na-achọpụta akụkọ niile nke mmetụta ọjọọ na ndị ọrụ Alli na Xenical, ụdị ika Orlistat. Agencylọ ọrụ ahụ natara puku kwuru banyere ndị ọrụ banyere nsonaazụ yana ọghọm ahụike na-eme n'oge ị na-eji ọgwụ ahụ.
Site na ọtụtụ akụkọ ọjọọ ahụike a, ọ nwere ike ịtụ ụjọ ụfọdụ ndị nwere ike ịgụnye itinye ya na mmemme belata. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na ihe ọjọọ ahụike gosipụtara FDA site ọha na eze, bụ naanị ihe gbasara Alli na Xenical, ọ bụghị kpọmkwem Orlistat.
Ruo ugbu a, enweghị ihe akaebe na-egosi na Orlistat bụ maka ọrụ ahụ ike na-adịghị mma nke ndị ọrụ Alli na Xenical nwetara. Ọ ga-ekwe omume na nsogbu ndị a nwere ike ịbịa site na ngwa ọzọ eji arụpụta ọgwụ ahụ.
FDA gara n'ihu na-enyocha nsonaazụ na nsonaazụ na-egbu egbu n'ihe metụtara Alli na Xenical. Agbanyeghị, ọ debeghị nkwupụta ọ bụla gbasara ịkwụsị ịhapụ nchekwa na nnabata nke ọgwụ.
FDA nwekwara nchegbu banyere eziokwu ahụ bụ na ọ na-anata akụkọ banyere naanị 1 n'ime ihe ọjọọ iri ọ bụla. Agencylọ ọrụ ahụ mekwara ọnwụnwa banyere ọrịa nsị nke Alli na ndị ọrụ na 2007.
Ọnwụnwa ndị ahụ gụnyere nyocha nke nyocha nke pre-clinical, ụlọ ọgwụ, post-post, na data iji ọgwụ ọjọọ metụtara mmachi akpịrị na mmerụ ahụ n'ihi ojiji nke Xenical ọgwụ ọgwụ. (3)
Nsonaazụ nke ọmụmụ a kwubiri na Xenical enweghị njikọ na ịmepụta oke egbu egbu ma ọ bụ mmerụ ahụ.
Agbanyeghị, FDA mere ka amata okwu ikpe 12 na nyocha azụmaahịa metụtara mmerụ imeju nke Xenical kpatara, yana otu eji Alli eme ihe. Nnyocha ọzọ nke ihe akaebe na-egosi na ihe ndị ọzọ na-enye aka, dịka ịba mmiri, na ndenye aha ma ọ bụ iji ọgwụ ọgwụ, nwere ike kpatara ihe kpatara mmerụ ahụ imeju nke ukwuu. (4)
3. Orlistat dị ka ọgwụ ọgwụ Na-efu
Oge ọzọ ị na-agbada n'okporo mgbakwunye mgbakwunye na GNC mpaghara gị, lelee ngalaba ọnwụ abụba. You'll ga-ahụ ọtụtụ ngwa ngwa ibu ibu na ike yana usoro pill. Na mmụba ọnwụ ọnwụ azụmahịa bụ ijeri dollar-ụlọ ọrụ, na e nwere ọtụtụ ụdị na-agbalị na-achị a ohere.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Orlistat bụ ọgwụ na-ebu ibu, ọ bụghị mmeju ọnwụ. Ọ bụrụ na ị na-ewere ọtụtụ ihe mgbakwunye ọnwụ, ị nwere ike ịnweta ụfọdụ mmetụta dị nro thermogenic, dị ka ọnya na-egbu mgbu ma ọ bụ obere mmụba na mkpali na ọnọdụ okpomọkụ.
Agbanyeghị, iji ọgwụ eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma ọgwụ ọgwụ ọjọọ, dịka Orlistat, nwere ike ibute nsonaazụ na-adịghị mma nke nwere ike ịmetụta ọdịmma gị ruo ogologo oge.
Orlistat na-arụ ọrụ nke ọma, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ikpebi ịbawanye usoro ha iji bulie nsonaazụ ha. Agbanyeghị, atụmatụ a ga-eme ka onye ọrụ tinye ya na nsogbu siri ike na ahụike ha. Jiri naanị Orlistat na nlekọta ahụike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eji usoro 120mg.
A: Etu esi atụfu ibu site na iwere Orlistat?
Mgbe ị na-eme ihe banyere Orlistat maka oke ibu, onye ọrụ ahụ ga-agbaso ndụmọdụ dọkịta dọkịta, ọ kachasị mgbe ị na-eji usoro 120mg nke ọgwụ ahụ. Tupu onye ah ụ amalite usoro mmebelata ibu ha, ọ dị ha mkpa inwe uche ziri ezi iji gbanwee mgbanwe ahụ na-aga nke ọma.
Onye buru oke ibu ma ọ bụ buru oke ibu kwesịrị ịghọta na ọgwụ abụghị azịza nsogbu ha. Naanị ihe ga - eme ka mwepu ibu dị ogologo oge bụ site na idozigharị nri, usoro omume, yana iwebata mmemme mmega ahụ.
Enweghị echiche a, onye buru oke ibu ma ọ bụ buru ibu ga-emesị gbalịa ịdabere na ịuseụ ọgwụ mgbe ha na-ahụghị ihe ha chọrọ site na mbọ ha. Useụbiga ọgwụ ókè nke ọgwụ a na-efunahụ nwere ike ịgụnye mmepe nke mmetụta dị egwu nke nwere ike imebi ahụike nke onye ọrụ.
Mgbe ị na-eji Orlistat n'ụdị ọ bụla, hụ na ị na-agbaso ntuziaka ịsụ ọgwụ edepụtara na akpa ahụ, ma ọ bụ site na ndị na-ere ọgwụ na-ekesa ọgwụ ahụ. Orlistat usoro onunu ogwu nwere ike ịdị iche site na BMI onye ahụ. Agbanyeghị, a takeụla ọgwụ ogologo oge karịa ka edepụtara, ma ọ bụ edepụtara na ntinye ngwaahịa.
Ndị buru ibu na ndị buru oke ibu nwere ike iji Orlistat n'akụkụ nri pụrụ iche, nke nwere obere abụba, na-egbochi calorie. Mgbe ị na-ahazi atụmatụ nri nke onye ọ bụla, ndị na-edozi ahụ kwesịrị ijide n'aka na abụba anaghị ede karịa 30% nke calorie niile na nri ọ bụla.
Onye obula aghaghi ịgbaso usoro nri na mmega ahụ, ma tinye Orlistat dịka ntụzịaka ndị dibịa ha. Imirikiti usoro ogbugba ndu na-ewepụta usoro ọgwụ atọ n'ime ụbọchị niile na-agbapụ iche.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ ahapụ nri a, mgbe ahụ, ha ga-ewepụ ite ọgwụ Orlistat a chọrọ maka nri ahụ.
Ọ bụrụ na ịpụ nri ma ọ bụ rie nri nke enweghị abụba ọ bụla, tụọ ọgwụ Orlistat gị maka nri ahụ. Onye ọrụ kwesịrị ịmalite ị payinga ntị na nyocha nri na nri. Guo ihe ndeputa na nri, ma zere nri ndi nwere abuba.
Orlistat nwekwara ike igbochi nnabata kwesịrị ekwesị nke vitamin na-asọ mmiri na nri gị. Ya mere, ndị ọrịa kwesịrị ịrịọ dọkịta ha ka ọ kọwapụta ụdị vitamin ha nwere ike ịmị mgbe ha na-a usingụ ọgwụ.
Ndị ọrụ kwesịkwara inyocha etu ha si a andụ ọgwụ na ọgwụ. Orlistat bụ ọgwụ nwere ikike iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi. Yabụ, ndị ọzọ nwere ike itinye aka na ọgwụ gị ma ọ bụrụ na ị lebara anya na ojiji gị.
Were ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ dịkarịa ala 2-awa tupu ọgwụ Orlistat gị. Usoro atumatu a na - egbochi mmeghachi omume ọ bụla na ọgwụ ndị ọzọ ị nwere ike iji. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị ọgwụ ọ bụla ọzọ, jisie ike gwa dọkịta gị tupu ịmalite Orlistat.
B: Gịnị ka m kwesịrị izere ebe m na-eji Orlistat?
Mgbe ị na-agwa dọkịta gị gbasara ahụike gị yana atụmatụ gị imeto oke ibu, gbaa mbọ hụ na gị na ndị dọkịta gị kwurịtara gbasara ahụike gị niile. Dọkịta kwesịrị ịma banyere ọgwụ niile ị na-a currentlyụ ugbu a tupu ha edebanye aha Orlistat.
Medicationsfọdụ ọgwụ nwere ike ibute ọgwụ mgbochi ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ, na-ebute nsonaazụ na-adịghị mma na onye ọrụ. Ga-agwa dọkịta gị gbasara otu esi eji ọgwụ ọ bụla.
Ọgwụ ndị na-arịa ọrịa shuga na-a orụ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ insulin
Cyclosporine (Sandimmune, Neoral, Jengraf)
Digoxin (Lanoxin, dijitalụ, Lanoxicaps)
Levothyroxine (Levoxyl, Synthroid, Levothroid) Ọgwụgwọ
Ọgwụ ndị na-eme ka ọbara gbasaa dị ka warfarin (Coumadin)
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nke a abụghị ndepụta zuru oke nke ọgwụ ndị nwere ike ịkpata nsogbu na ojiji Orlistat.
Gị na dọkịta gị gbaa oge iji kpaa ọgwụ, usoro mgbakwunye, yana ngwaahịa ndị ọzọ OTC nke ị na-eji nwere ike ibute mmekọrịta gị na ya mgbe ị na-eji Orlistat.
Ọnweghị n'ọnọdụ ọ bụla ị kwesịrị ị buru Orlistat na-akọghị onye ọkachamara n'ịgwọ ọrịa. Ọ bụ ezie na ụdị 60mg dị njikere maka ojiji OTC, onye ọrụ kwesịrị ịgakwuru onye ọkachamara ọgwụ tupu ịgbakwunye ya na nri ha na usoro mmega ahụ.
Mgbe ewere ya na oke ọnụọgụ ma ọ bụ ogologo oge, Orlistat nwere ike ibute nnukwu ahụike. Ndị ahụ chere na ha ga-agabiga na Orlistat kwesịrị ịkpọ enyemaka ngwa ọkụ ahụ ngwa ngwa ma kpọọ maka ụgbọ ihe mberede.
Ndị ọrịa kwesịrị izere ị Orụ Orlistat ma ọ bụrụ na ha nwere ihe nfụkasị ọ bụla na ọgwụ ndị dị na ọgwụ. Ejila Orlistat ma ọ bụrụ na ị na-emeso ọnọdụ ahụike ọ bụla.
Ọrịa ịba ala na-adịghị ala ala
Akụkọ gbasara gallstone
Ọrịa shuga Idị nke Abụọ
Ọrịa iri nri dịka anorexia ma ọ bụ bulimia
Ọ bụrụ na ugbu a na-eji ọgwụ ndị ọzọ na-atụfu ọgwụ na-adịghị mma ma ọ bụ na OTC
4. Nso utịp Can Nwere Ike Na-atụ Anya Ya Site na Iji Orlistat?
Ọ dị oke mkpa ka ndị mmadụ nwee nghọta ịghọta na o nweghi ihe dịka “ọgwụ adịghị oke ọrụ ebube”. Ọ bụ ezie na ojiji nke Orlistat n'akụkụ nri na-eme ka calorie na-egbochi mmechi na mmega ahụ ga-eme ka ọnwụ dị arọ nke ndị buru oke ibu ma ọ bụ buru oke ibu, ha kwesịrị itinye atụmanya ezi uche dị na ya.
Mmetụta Orlistat ịdị iche n’otu onye gaa na nke mmadụ, ikekwe n’ihi na mmadụ niile nwere metabolism na ụdị ahụ pụrụ iche. Agbanyeghị, ịnwere ike ịtụ anya na ọnụego oke abụba ga-adabacha, na iji ọgwụ ahụ nwere ike inyere gị aka wụsa pound ole na ole kwa izu karịa na nri na usoro mmega ahụ naanị.
Kaosiladị, ịtụ anya na oke abụba abụtụghị ihe ezi uche dị na ya. O nwere ike iji onye ọrịa ahụ afọ ụfọdụ, ma ọ bụdị ọtụtụ iri afọ, iji rute n'ọnọdụ oke ibu ha ugbu a. Ya mere, na-atụ anya ka abụba gbazee n'otu ntabi anya, ma ọ bụ ọ bụ naanị ọnwa ole na ole, ga-eme ka onye ọrụ ahụ nwee nkụda mmụọ na nsonaazụ ya.
Ndị dibịa bekee kọwara ọnwụ dị oke mkpa dị ka mbelata ibu arọ mmadụ, nke 5% ma ọ bụ karịa ihe karịrị otu afọ. Studies na-egosi na ihe karịrị 40% nke Ndị ọrụ Orlistat mezuo ebumnuche a, ma ọ bụrụ na ha na-agbaso ndụmọdụ ọkachamara nke dọkịta na ndị ọkachamara n'ihe banyere nri.
Ọmụmụ ihe ahụ gosikwara na ndị ahụ na-eri nri amịlori kalori, yana ịnweta mmega ahụ oge niile, na ojiji nke Orlistat, tụfuru nkezi nke 5.7-lbs karịa otu ndị na-achịkwa na-adịghị eji Orlistat. (5,6)
(1) Kedụ uru dị n'iji Orlistat?
Enwere nnukwu uru iji Orlistat dị ka akụkụ nke usoro ahaziri ahazi ma ọfụma dị mfe. Ọgwụ dị irè iji gbochie anụ ahụ ịmịkọrọ abụba, si otú a na -ebelata akụkụ dị ukwuu nke ngụkọta calories onye ọrịa na-etinye.
Otú ọ dị, ọ bụ ezie na Orlistat bụ ihe mgbakwunye bara uru na nri ọnwụ, ma na-emepụta mmetụta ndị pụtara ìhè, anyị enweghị ike ịkọwapụta na ndị mmadụ ekwesịghị iji ọgwụ a eme ihe. Ndị ahụ na-adabere na ndenye ọgwụ ma ọ bụ mgbakwunye dị ka isi nkuku nke usoro nha ha ga-enweta nsonaazụ na-enweghị isi.
Individualsfọdụ ndị anaghị agbanwe agbanwe na nri nri ha ma ọ bụ ọkwa mmega ha, kama nke ahụ, ha dabere na Orlistat ka ha rụọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ndị a ga-enwe nkụda mmụọ n'ihi ihe ndị ha nwere na-emebi ya.
Orlistat uru mmemme mmebi ibu nke nwere nhazi akọwapụtara na ebumnuche doro anya. O yighị ka onye ọrịa ọ ga-enwe ihe ọmụma ma ọ bụ mkpali iji mezue mgbanwe ahụ ha naanị.
Ya mere, iwere onye na-ahụ maka nri na-azụ ihe na onye na-azụ ihe, yana ịgbaso usoro nri na usoro mmega ahụ, ọ ga-abụrịrị onye ọ bụla na-eme mmemme belata.
Ọtụtụ ndị buru oke ibu na ndị buru ibu na-achọpụta na ha na-enwe nnukwu mbibi na izu abụọ mbụ nke ịmalite iri nri ahụike na mmega ahụ - nke ahụ bụkwa tupu ha ewebata mgbakwunye ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla dị ka Orlistat.
Agbanyeghị, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe ifelata ịdị arọ niile ọbụlagodi mgbe ha na-eri nri na mmega ahụ kwesịrị ekwesị. Ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta na oganihu ha na-aga n’ihu n’iji ụzọ anụ ahụ eme ihe. Ndị a nwere ike ịchọpụta na Orlistat na-erite uru na ha n'ọnọdụ a, na-enye ha ohere inweta oke nkwụsi ike mgbe niile na mgbanwe ahụ ha.
(2) Kedu ihe ọghọm dị na iji Orlistat?
Ndị mmadụ n'otu n'otu na-atụle iji Orlistat kwesịrị iwepụta oge iji nyochaa ndepụta nke nsonaazụ Orlistat metụtara na ọgwụ ọgwụ na-ebu ibu. Orlistat bụ ọgwụ dị ike nke e mere maka iji ya na nri na-egbochi calorie nke edoziri maka onye na-edozi ahụ.
TCdị ọgwụ OTC nwere ike ịdịrị ya maka ịzụta na-enweghị ndenye ọgwụ, mana ọ nweghị onye kwesịrị iji Orlistat na-agwaghị dọkịta ha tupu oge eruo.
N'ọnwụnwa ọnwụnwa metụtara nlekọta Xenical nye ndị ọrịa, 27% zụlitere mmanụ mmanụ n'ụdị uwe ha, 24% ndị ọrụ nwetagoro gas na-esokwa mwepu agụụ, 22% nke ndị ọrụ nwetara mmalite nke ajọ ngwa ngwa, 11% gosipụtara mmụba na ha ọnụọgụgụ nke afọ na -eme ihe ọgbụgba, yana ihe dịka ụbụrụ 8% nwere nsogbu ọgbụgba.
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, afọ ọsịsa bụkwa mmetụta dị n'akụkụ nke iji ọgwụ, karịsịa mgbe mbụ ịmalite iji ọgwụ ahụ dị oke egwu.
Mmeghachi omume nfụkasị ahụ na ọgwụ adịghị obere, yana ụfọdụ n'ime mmetụta mmetụta ndị ọrụ na-enwe na izu ole na ole mbụ iji Orlistat gụnyere ihe ndị a.
Mmanu mmanu ma obu ntupo di n’okpuru uwe gi
Agba aja aja ma ọ bụ mmanụ nwere agba dị n’ime stool
Gas tinyere mmanụ mgbaze
Dide oche, ịbawanye ngwa ngwa, na enweghị ike nke onye ọrụ ijikwa afọ ime ha
Mmụba na ugboro ugboro nke eriri afọ
Ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, mgbu afọ, afọ ọsịsa, na mgbu azụ
Ike ọgwụgwụ na adịghị ike, akpịrị na-acha ụrọ, oke nchara, enweghị agụụ, itching, ma ọ bụ ọdịdị jaundice (edo edo nke anya ma ọ bụ nke anụ ahụ)
Ihe ndị ọzọ a na-ahụkarị na ndị ọrịa na-enwe mgbe ha na-ewere Orlistat gụnyere ihe ndị a.
Isi okwu na goms na ezé
Mmepe nke ihe mgbaàmà dị ka oyi
Mmepe nke ụdị ihe mgbaàmà ọrịa flu
Isi ọwụwa na azụ mgbu
Mpelata aka na oke akpụkpọ ahụ
Ndị ọrụ kwesịrị ịmara na nke a abụghị ndepụta aha zuru oke nke nsonaazụ ọ bụla enwere ike ịda mgbe ị na-eji Orlistat. Ọ bụrụ na inwee mmetụta dị n'akụkụ ma ọ bụ mmeghachi omume na-adịghị mma maka ọgwụ ahụ, kọọ ahụmahụ gị na FDA na 1-800-FDA-1088.
5. Kedu ihe Ndị Ọrụ Na-ekwu Banyere Orlistat?
Aroundlele nyocha nke ịntanetị site n'aka ndị ọrụ, na-eduga nsonaazụ dịgasị iche, ma maka ma imegide ọgwụ. Nyocha Orlistat sitere na ndị mmadụ nwetara nsonaazụ dị ịrịba ama nye ndị nwere ụdị mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Agbanyeghị, ọ dị ka ọtụtụ okwu metụtara ndị buru oke ibu, ma ọ bụ ndị nwere BMI karịrị 27, nwere ahụmịhe dị mma na ọgwụ ahụ. Nnyocha niile dị mma anyị chọpụtara banyere ọgwụ ọgwụ na-akpata ibu dịịrị ndị ọrụ asịrị nke na-eme mgbanwe ahụ n'ahụ n'aka onye ọrụ ọgwụ.
Ya mere, ndị a haziri usoro arụmọrụ ha dị mma. Ha niile goro onye na-ahụ maka ihe na-edozi ahụ nri, soro dọkịta ha na-enyocha kwa izu, ma rapara na usoro ịgbadogwu nke ọkachamara ahụike ha dụrụ ha ọdụ.
Nke a bụ ọmụmaatụ nke ezigbo nsonaazụ Orlistat anyị hụrụ n'ịntanetị.
"Aha m bụ Ron, m buru ibu ruo n'ókè nke na-emebi ndụ m. Ka m na-agagharị na windo, ọrịa m na-akawanye njọ, agakwuuru m dọkịta m ka o nyere m aka. Doc ahụ mere ka mụ na onye na-eri nri na-akpakọrịta, m wee ghọta mkpa calorie m maka ụbọchị ahụ.
Mgbe ọnwa isii nke iri nri nke ọma ma na-agba ọsọ kwa ụbọchị, ahụrụ m ezigbo nsonaazụ, mana ọganihu m malitere ịkwụsị. Dọkịta m tụrụ aro ka m nwalee Xenical (Orlistat). Echeghị m ọtụtụ ihe na ya, mana nha m gara n'ihu ụbọchị nke abụọ n'iji ọgwụ ahụ.
Otu afọ mgbe e mesịrị, ọ dị m ka ọ bụ mmadụ ọhụrụ. Enwere m ọkara nke ihe mgbaru ọsọ m, na pound na-abịa. "
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụghị mmadụ niile ga-enweta nsonaazụ a, mana nke a bụ ezigbo akara ngosi nke nsonaazụ ị nwere ike ịtụ anya mgbe ihe niile na-aga nke ọma.
N'ihe atụ a, nsonaazụ Ron bụ ezigbo nsonaazụ, mana nke ahụ apụtaghị na onye ọzọ enweghị ike ịmeghachi otu nsonaazụ ahụ maka onwe ha, ọ bụrụhaala na ha nwere nlekọta ahụike ziri ezi.
6. Igodo Takeaways maka iji Orlistat dika ogwu Ibu Ibu
Ibu oke ibu bu ihe ojoo nye ahu ike ndi America n’ime obodo nile. Ọnụ ọgụgụ oke ibu na-abawanye ma okenye, ụmụaka na ụmụaka, ebe South na Ọwụwa Anyanwụ nke United States kachasị ike maka ọrịa na-agbasawanye.
Oké ibu na-ebute mmepe nke ọtụtụ nsogbu ahụike na-adịghị ala ala, dịka ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, na ọrịa obi. Ọnọdụ ahụ dịkwa ọnwụ nke 18% nke ndị America niile gbara afọ 40 ruo afọ 85.
Ọtụtụ ndị America na-echigharịkwuru ọgwụ na mgbakwunye iji nyere ha aka mee ka mmemme nhalata ibu ha. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime ndị a anaghị eme ihe zuru oke ịgbanwe ụdị ndụ ha, nri ha, na mmega ahụ tupu ha amalite ụzọ ụzọ ibu ibu ndị ọzọ.
Ndị America kwesịrị ịghọta na ọ nweghị ụzọ dị mkpụmkpụ iji tufuo abụba ahụ. Inweta ihe omuma banyere iri nri na omume nke oma bu ihe di nkpa iji weghachite aru aru. Tupu ịmalite iji ọgwụ ọjọọ na-emebi ihe, ọ kachasị mma iji hụ na ị na-eri nri ma na-emega ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Naanị tụlee iji Orlistat mgbe ị nyochachara dọkịta gị gbasara ebumnuche ịbelata oke. Dọkịta gị ga-ezigara gị onye ọka mmụta tozuru etozu maka atụmatụ nri nke ga-emezu ihe caloric chọrọ maka oke abụba.
Ndị ahụ na-anwale mmefu oke ibu ga-ahụrịrị na ha wulitere otu gburugburu ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ nsonaazụ. Dọkịta gị, onye na-ahụ maka nri gị, ahụike ya, ahụike ya, na onye na - azụ gị na - etolite otu nkwado gị iji nye gị ohere kachasị mma iji merie ihe mgbochi ọ bụla na ụzọ gị iji wee nweta ebumnuche ịbelata oke.
Orlistat dị ka ịgbakwunye mmanụ ụgbọelu na injin na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ndị ọrịa nwere usoro nri ha na usoro mmega ahụ, na-agbakwunye ọgwụ na -efu oke ibu dịka Orlistat nwere ike ime ka nsonaazụ ya pụta ngwa ngwa.
Tupu ha ekpebie ị Orụ Orlistat, ndị ọrịa ga-agakwuru onye ọkachamara ahụike ka ha mara ma ha tozuru ihe ntozu maka ọgwụgwọ.
Mgbe ị na-enyocha nsonaazụ nke ahụmịhe onye ọrụ na Orlistat, ọ bụ ngwakọta ngwakọta nke nsonaazụ. Agbanyeghị, ọ dị ka ndị ahụ na-ewere Orlistat na ntuziaka nke dọkịta ma were ndị otu nkwado nkwado ruru ihe ha chọrọ.
N'akụkụ ntụgharị, enwere ọtụtụ ndị nwere ahụmịhe dị egwu na iji Orlistat. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọ dị oke mkpa maka ndị mmadụ n'otu n'otu were Orlistat n'okpuru nlekọta nke ọkachamara ahụike.
Orlistat na-enye ndị buru oke ibu na oke ibu na FDA kwadoro nke ọma maka nhọrọ counter maka ịbawanye mbọ ha nwere ibu.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ndị ọrịa niile na-eji ọgwụ ahụ, chọrọ agụmakwụkwọ gbasara mgbanwe omume na-aga n'ihu n'oge ha na-eji ọgwụ, yana.
Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Mmetụta orlistat pere mpe n’arụ n’arụghị n ’ike na-adịkarị obere: izu iri na isii, ihu abụọ, ọnwụnwa a na-achịkwa. Ann Pharmacother. 16; 2006 (40): 10-1717
Smith SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al. Orlistat 60 mg na-ebelata anụ ahụ visceral adipose anụ ahụ: izu izu 24, nke a na-achịkwa placebo, ikpe ikpe multicenter. Ibu oke ibu (Oge opupu ihe ubi). 2011; 19 (9): 1796-1803.
Synephrine HCL Powder - Abụba burner na ibu ọnwụ Mmeju Ihe niile I Kwesịrị Aboutmara Banyere Pregabalin